बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन! :: जुनी भण्डारी :: Setopati
बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन!
'छ्या दसैं पनि आयो है' ल्यापटप झोलामा राख्दै प्रियाले भन्छे।
'लौ किन छ्या नि? दसैं आउँदा खुसी लाग्या छैन तँलाई?' अचम्म मान्दै सोध्छु।
मतिर हेर्दै नहेरी झोलाबाट मोबाइल निकालेर समय हेर्छे अनि प्रिया बोल्छे- जति खुसी हुनु बिहे नहुञ्जेल भइयो, बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन मलाई।
हामी उसको अफिसबाट बाहिर निस्कियौं।
प्रिया एक निजी संस्थामा जागिर गर्छे। उसको आजबाट दसैं बिदा भएको थियो। अफिस बिदा भएपछि दसैंको किनमेल गर्न सँगै जाने सल्लाह भएको थियो हाम्रो। त्यसैले म उसलाई लिन त्यहाँ गएकी थिएँ। उसको कुरा अनि निराश अनुहार देखेर किनमेल गर्न जाने मनस्थिति नै बनेन।
'हिँड् जाऊँ त्यहाँ मिठ्ठो चटपटे पाउँछ, पहिले चटपटे खाऊँ अनि बजार जाउँला' मैले उसको मुड फ्रेस बनाउने जमर्को गर्छु।
हुन त म खासै चटपटेको पारखी होइन तर सच्चा साथीको कर्तव्य निर्वाह गर्नु थियो।
'दाइ, ६० को चटपटे बनाउनु ल, पिरो कम अमिलो ट्वाक्क' मैले कुर्सी मिलाउँदै चटपटे अर्डर गर्छु।
त्यसपछि उसले आफ्नो दुःखहरूको पोको बिस्तारै खोल्दै जान्छे।
'मेरो घरको भव्य दसैं', संयुक्त परिवारकी एकमात्र बुहारी म।
घरमा जमघट हुन थालिसक्यो। काठमाडौंबाट कान्छो सासू-ससुरा छोराछोरीसहित आइसक्नुभएको छ, आफ्नो घरमा आउनै पर्‍यो दसैंमा।
बेला-बेला उहाँहरूको अगाडि वेटर झैं हाजिर भइरहनु पर्छ।
धन्न ट्वाइलेटसम्म आफैं जानुपर्ने बाध्यता छ, यो पनि अरूले गरिदिएर हुने थियो भने टोली त्यहाँबाट के डग्ने थियो।
मोबाइलमा २०,२२ वटा मिस्डकल हुन्छन् सुत्ने बेलामा देखिन्छ।
फोन उठाउने फुर्सद दसैंकी बुहारीलाईं हुँदो हो त! दसैंको दिन बिहानदेखि हात खाली हुँदैन हामी सासू- बुहारीको।
कुनै परिकार त अघिल्लो दिन नै पकाएर राख्नुपर्छ नत्र भ्याइँदैन।
दसैंको दिनको कुरा सुन।
कान्छी सासू बिहानैदेखि म्यासेन्जरमा दसैंको शुभकामना आदानप्रदानमा व्यस्त।
पुरूष सदस्यहरू कतिबेला 'चिया खाऊँ न एकलट अझै, कतिबेला 'खोई अझै तयार भा'छैनौ?' यति भन्नमात्र अगाडि पर्छन्।
साइतमा टीका थाप्नलाई यस्सो कपाल समेट्यो, सारी नमिले नमिलोस् भनेर यस्सो बेर्यो। तयार हुन नभ्याउँदै एकलट पाहुनाको आगमन भइसक्छ। यस्सो फेसबुक हेर्यो उता लण्डनमा बहिनीले सोह्र श्रृंगार गरेर 'ह्याप्पी दसैं' भन्दै फोटो पोस्टिइसकेकी हुन्छे।
'तेरा ह्याप्पी दसैं' भन्दै मुख बिगारेर फेसबुक बन्द गर्छु र पाहुनालाई खाना सर्भ गर्न थाल्छु।
हो यस्तै भव्य दसैं हुन्छ साथी मेरो त, त्यसैले 'आइ हेट दसैं' भनेर दु:खको पोको रित्याउँछे।
चटपटे दाइलाई पिरो कम है भनेर त भनियो तर उसको कहानीले पो पूरै अमिलो पिरो बनाउँछ मलाई।
साँझ घर गइसकेपछि प्रियाको भव्य दसैंको समाधानबारे धेरै बेर सोचिरहें। बिहेपछि पनि महिलाहरूलाई दसैं रमाइलो बन्न सक्ने सभ्य दसैंबारे केही उपायहरू कल्पना गरें।
बेलुका स-परिवार बसेर जुटपत्ति खेल्छन्। म्यारिज खेल्न लेडिज ग्रुपलाई आउँदैन, बानी छैन नि! दसैंको दिन पनि स-परिवार मिलेर काम गर्दा कति सहज,रमाइलो र छिटो काम सकिन्छ।
टीका लगाउने बेलामा प्रियाकी नन्दको फोन आउँछ,'हामी त घरबाट हिँडिसक्यौ,दाइ भाउजुलाई पनि नरोक्नु ल, हामी त पछि पनि भेट भइहाल्छौं। उता भाउजुको आमाबुवा भोकै बस्नुहुन्छ छिटो गरेर पठाइहाल्नु' भनेर आमालाई सिकाउँछिन्।
प्रिया र उनका श्रीमान समयमै माइत पुग्छन्। उता प्रियाका भाइ बुहारी पनि ठिक्क ससुराली हिँड्न लागेका हुन्छन्।
'ल ल गइहाल, हामी आमाबुवासँगै टीका लगाइहाल्छौं' भनेर प्रियाले भाइ बुहारीलाई बिदा गर्छे।
यता पनि बाबुआमाले समयमै खाना खान पाउँछन्। सबै जना खाना खाएर पारिपट्टि बुढा हजुरबुवाकोमा टीका थाप्न जान्छन्।
हजुरबुवाले बृद्धभत्ताको थैलीबाट दक्षिणा निकाल्दै खाममा राख्न लागेको देखेर प्रियाका श्रीमानले भन्छन्,'हजुरबुवा दक्षिणा होइन आशीर्वाद टन्न दिनुस्,जमरा र टीका लगाइदिनुस् यही नै हाम्रो लागि दक्षिणाभन्दा अमूल्य रहनेछ।' सबैले हो मा हो मिलाउँछन्।
हजुरबाले नातिनीको निधारमा टीका टाँस्दै मन्त्र पढ्न थाल्नुहुन्छ, 'जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ..........' यसरी असत्यमाथि सत्यको विजय भए जसरी भव्य दसैंलाई सभ्य दसैंले पराजित गर्छ।
यो लेख लेखिरहँदा धेरै लाइक र धेरै शेयरको भन्दा पनि पंक्तिकारलाई एउटा कुराको आश लागेको छ।
त्यो हो- आफूले दसैंलाई भव्य बनाइरहँदा,आफू रमाइलो गरिरहँदा घरका अन्य सदस्यलाई कामको लोडमात्र थपिइरहेको त छैन भन्ने ख्याल सबैलाई होस्।
अनि हरेक पुरूष र हरेक महिलालाई पनि बिहेभन्दा अगाडिजस्तै बिहेपछि पनि दसैं रमाइलो गरी मनाउने अवस्था रहोस्। भव्यभन्दा पनि दसैं सभ्य होस्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २३, २०७८, ०४:०१:००